Howlgal Qorsheysan Oo Laga fuliyey Agagaarka Villa Soomaaliya – XAMAR POST
Howlgal Qorsheysan Oo Laga fuliyey Agagaarka Villa Soomaaliya
By Mohamed Abdi On Mar 17, 2021
Ciidamadda Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa xalay xaafadaha ku teedsan Aqalka looga arimiyo waddanka waxay ka sameeyeen howlgal saf-ballaaran oo guri-guri ah kaasoo ay kusoo qabqabteen boqolaal dhalinyaro ah, sida ay xaqiijiyeen saraakiil dhanka amniga ah.
Howlgalka oo bilowday xalay saqdii dhexe ayaa, sidda ay xoguhu muujinayaan, wuxuu soo gaarey aroornimadii Arbacada maanta ah.
Meelaha uu saameeyay howlgalkaas aan la ogeyn sababta dhabta ah ee soo dejisay waxaa kamid ah degmadda Boondheere iyo xaafadaha kale ee ay Madaxtooyadda ku teedsan.
“Dadka lagu soo qabqabtay howlgalkaas ay qaadeen ciidamaddan loo yaqaano Kooya Casta ayaa la isugu keenay Barxadda Iskaashatooyinka. Dhalinyaro afka u xiran tahay oo ka tirsan dharcadka hay’adda sirdoonka NISA ayaa dhowr far-muuqay kuwaasoo la watay,” ayay sheegeen saraakiisha.
Shaqsiyaadkaas lala baxay oo tirdooda aysan caddeyn ayaa, sidda ay macluumaadyadda tibaaxayaan, waxaa loo dhaadhiciyey xabsiga ciidamadda Madaxtooyadda halkaasoo ay ku wajahayaan su’aallo waydiin.
Madaxtooyadda Soomaaliya ayaan wali wax war ah kasoo saarin howlgalkaas. Isku dayo xiriir lala sameyn lahaa saraakiisha ciidamada ayaan guuleysan.
Dhaqdhaqaaqaas ciidan ayaa kusoo hagaagaya xilli maalmihii u dambeeyay ay caasimadda ka dhaceen falal liddiga ku ah nabad-gelyadda oo ay kamid tahay hoobiyeyaal lagu weeraray xeyndaabka xerada Xalane oo ay degan yihiin madaxwayneyaasha Puntland iyo Jubaland.
Wasiirka Amniga Soomaaliya Oo la Kulamy Ra’iisal Wasaaraha Dalka Qatar
Ra’iisul Wasaare Rooble Oo Wakiil Ka Ahaa Madaxweyne Farmaajo